भारतीय समाजवादी आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रस्तावनाहरू थिए । हरेक राजनीतिक प्रस्तावना गान्धीबाट नै प्रभावित भएको देखिन्छ । माक्र्सवादी र समाजवादीहरूले गान्धीलाई स्वतन्त्रता संग्रामका लागि मात्र नेता मानेका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सारा संसारमा क्रान्तिकाे विगुलको ध्वनि गुञ्जन भइरहेको थियो । चाइनिज क्रान्त्रि, भियतनामको संर्घष, कोरियाको आन्दोलन र क्युवालगायत अफ्रिकी मुलुकहरूको आन्दोलनले उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था थियो ।
गान्धीले भारतमा चलिरहेका विभिन्न आन्दोलनहरूलाई अहिंसा र सत्याग्रहको बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्दै स्वतन्त्रता संग्रामको राप र तापलाई बढाएका थिए ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा सन् १९३६ मा मेरढमा एउटा बृहत् सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनमा मार्क्सवादीहरूलाई हिंसाको बाटो परित्याग गरेर गान्धीको सूत्रअनुसार आन्दोलनमा सरिक हुन आग्रह गरिएको थियो ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको छत्रछायाँमुनि योग्य, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी युवाहरूको एउटा समूह थियो । जसलाई कांग्रेस सोसलिस्टका रूपमा नामकरण गरिएको थियो ।
कांग्रेस सोसलिस्टहरूको बीचमा पनि विभिन्न वैचारिक समूहहरू थिए । कांग्रेस समाजवादीहरू वेदान्त, गान्धीवाद र पश्चिमी लोकतन्त्रबाट प्रभावित थिए । कांग्रेस सोसलिस्टमा मूर्धन्य व्यक्तित्व नेताहरूमा जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया, एल.आर. मसानी, अशोक मेहता, अच्युत परर्वहन, सम्पूर्णानन्द, आर्चाय नरेन्द्र देवजस्ता उच्च कोटिका व्यक्तिहरू थिए ।
समाजवादी विचारधारामा पनि एकमत थिएन । जयप्रकाश नारायण र आचार्य नरेन्द्र देवले आफूलाई मार्क्सवादी समाजवादी भन्ने गर्थे । एसआर मसानी र अशोक मेहताले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी समाजवादी भन्ने गर्थे ।
तर, अच्युत पटवर्द्धन र डा. राममनोहर लोहियाले आफूलाई गान्धीवादी समाजवादीको रूपमा परिचय दिन्थे । त्यस्तै, सम्पूर्णानन्दले आफूलाई वैदिक समाजवादी भन्ने गर्थे । अर्थात् समाजवादी नेताहरूको बीचमा वैचारिक विविधता थियो ।
कांग्रेस समाजवादीहरू नेहरू र पटेलको नेतृत्वसँग सहमत थिएनन् । उनीहरूको प्रष्ट बुझाइ के थियो भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सामन्त, भूमिपति, रजौटा, जमिनदार र उच्च वर्गको राजनीतिक पार्टी हो ।
भारतजस्तो पछौटेपन र गरिबीबाट पिल्सिएको समाजलाई नेहरू र पटेलको नेतृत्वले मुक्ति दिन सक्दैन । अर्कोतर्फ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सन् १९४७ मा समाजवादीहरूलाई द्वैध सदस्यता त्याग्न प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अर्थात् राष्ट्रिय कांग्रेसको छत्रछायाँमा कांग्रेसीबाहेक अरु परिचय हुनु हुँदैन भन्ने नेहरू र पटेलको मान्यता थियो । जुन कुरा समाजवादीहरूलाई मान्य थिएन ।
सन् १९४८ मार्चमा विधिवत् रूपमा समाजवादीहरू कांग्रेसबाट अलग भए । तर, भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको लडाइँमा समाजवादीहरूको भूमिका उल्लेख्य छ ।
जयप्रकाश नारायण र डा.लोहियाले क्रान्तिको बागडोर नै सम्हालेका थिए । यसै सन्दर्भमा जयप्रकाश नारायण र डा. लोहियाले सन् १९४२ मा सप्तरी जिल्ला प्रवेश गरेर विभिन्न सम्मेलनहरू गरेका थिए । ‘आजाद दस्ता’को माध्यमबाट नेपालबाट अंग्रेजविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध गर्नेसमेत जेपी र डा. लोहियाले तयारी गरेका थिए । यस्तो पुनित काममा नेपाली कांग्रेसका नेता रामेश्वरप्रसाद सिंहले डा. लोहिया र जयप्रकाश नारायणलाई आश्रयसमेत दिएका थिए ।
आन्दोलनको क्रममा नै डा. लोहिया र जयप्रकाश नारायणलाई सप्तरी जिल्लाको तत्कालीन सदरमुकाम हनुमाननगरमा राणाहरूले कैद गराएका थिए । रामेश्वर प्रसादलगायत धेरै युवाहरूले लोहिया र जयप्रकाश नारायणलाई कैदमुक्त गराउन सफल भए । तर, त्यसको बदलामा २० जना नेपालीहरूलाई राणाहरूबाट जेल चलान गरियो ।
यस्तो सहयोग र सद्भावले गर्दा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतका समाजवादी नेताहरूले निरन्तर सहयोग र सद्भाव देखाए । भारत स्वतन्त्र भएपछि समाजवादीहरूको मुख्य चिन्ता नै नेपालबाट राणा शासन मुक्त गराउनु थियो । भारतको समाजवादी आन्दोलनमा नेपाली युवाहरूको सक्रियता एकदमै बढेको थियो ।
सन् १९३४ मा नै बीपी कोइराला विहारको समाजवादी पार्टीको महामन्त्री भइसकेका थिए । बीपीको दार्शनिक र बौद्विक व्यक्तित्वले गर्दा भारतको राजनीतिमा पनि निकै प्रभाव थियो । अंग्रेजविरुद्धको आन्दोलनमा बीपीले ४ वर्ष यातनासहितको कठोर जेलजीवन भोगिसकेका थिए ।
अर्कोतर्फ नेपाली युवाहरूले ‘अल इण्डिया नेपाली कांग्रेस’, ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ र ‘नेपाल लोकतान्त्रिक दल’ भारतमा संचालन गरेर राणाविरोधी आन्दोलन चलाइरहेका थिए ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि समाजवादीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई तीन तहबाट सञ्चालन गरे- पहिलो संर्घष, दोस्रो संसदीय क्रियाकलाप र तेस्रो रचनात्मक काम ।
यसै सन्दर्भमा सन् १९४८ मा नासिक सम्मेलन भयो । नासिक सम्मेलनको माध्यमबाट भारतलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट लग्ने विभिन्न राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो र सुचारु बनाउन समाजवादीहरू पार्टीलाई अहिंसात्मक बाटोबाट नै लग्न दृढ संकल्पित भए ।
युसुफ मेहर अलीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनले पार्टीलाई नयॉ दिशा दिन सफल भयो । सन् १९५१ मा राचीमा पार्टीले चुनावी दस्तावेज तयार गरे । समाजवादको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै पार्टीलाई पुँजीवाद र साम्यवादबाट समदूरीको सिद्धान्तअनुरुप अगाडि बढ्न पार्टीले आफ्नो गोरेटो तयार गरे । यसै सन्दर्भमा पार्टीले विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण कार्यकर्तामाझ राख्न सफल भए ।
अशोक मेहताले कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको बाध्यता (कम्पलसन अफ ब्याकवार्ड इकोनोमी) मा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरे भने डा. लोहियाले ‘साम्यवाद र पुँजीवादबाट समदूरी’ को प्रस्तावना कार्यकर्तामाझ राखे ।
दुर्भाग्यवश डा. लोहिया र जय प्रकाश नारायणले चुनावमा भाग लिएनन्, जसले गर्दा समाजवादी पार्टीले चुनावमा राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेन । तर, भारतीय समाजवादीहरूको प्रभाव विश्वका अरू मुलुकहरूमा पनि फैलिइरहेको थियो ।
सन् १९५३ रंगुनमा एसियन कन्फरेन्स सम्पन भयो । जापान, मलेसिया, बर्मा, नेपाललगायत विभिन्न मुलुकहरूमा नेताहरूले समाजवादको सिद्धान्तमाथि बहस गरे ।
स्मरणीय रहोस्, बीपीले त्यतिखेर नै आफ्नो व्यक्तित्व, कृतित्व र नेतृत्वका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमन्चको आफ्नो पहिचान बनाइसकेका थिए । संसारको समाजवादी आन्दोलनको मूर्धन्य नेताहरूको सूचीमा बीपीले आफ्नो नामकंण गरिसकेका थिए ।
अर्कोतर्फ जेपीको चुनावी राजनीतिप्रति मोह भंग भयो । जेपी विनोवा भागेको सर्वोदय आन्दोलनमा होमिए । धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई गान्धीको सूत्र प्रयोग गरेर गरिब र निर्धन व्यक्तिलाई जग्गा र धन दान गराउनु नै सर्वोदय आन्दोलनको ध्येय थियो ।
जेपीले त्यसमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरे । समाजवादी आन्दोलनमा डा. लोहिया अगाडि बढे । सन् १९६२ मा भारत चीनबाट युद्धमा हारिसकेको अवस्थामा नेहरूको विरोधमा डा. लोहिया चुनाव नै लडे ।
लोकतन्त्र बलियो विपक्षबिना हुन सक्दैन भन्ने कटु सत्यलाई प्रयोग गर्दै सन् १९६७ मा गैरकांग्रेस सरकार भारतका विभिन्न राज्यहरू पञ्जाव, विहार, उत्तर प्रदेश, हरियानामा डा. लोहियाको नेतृत्व र अगुवाइमा बन्न सफल भयो । डा. लोहियाको निधनपछि जयप्रकाश फेरि समाजवादी आन्दोलनमा होमिए ।
इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपत्कालीन शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा ‘जेपी आन्दोलन’ को माध्यमबाट प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाए । भारतको समाजवादी आन्दोलन प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस आज रणभुल्लको अवस्थामा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस उषाकालदेखि नै निरकुंशतासँग लडेको ऐतिहासिक पार्टी हो । राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक अवतरणसम्म यो पार्टीले ओजपूर्ण योगदान गरेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा बीपीको दर्शन, गणेशमानजीको दृढता र भट्टराईको चतुर्‍याइँलाई इतिहासको धरोहर र पुँजी बनाएर त्यसलाई पुँजीकृत गर्दै समाजवादको मर्मअनुरुप समतामूलक प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माणका लागि ढोंगी, अहङ्कारी र तथाकथित् राष्ट्रवादीसँग लड्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व हो ।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसम्ममा नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली इहितास छ । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना !
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३१, २०७७, १९:०७:००